Saka unogona kuona bhatiri re iPhone kubva kuApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekuona iPhone bhatiri kubva kuApple Watch
Iyo Apple Watch iri kutibira isu yenguva yakareba kunyangwe tisina kuvapo munzvimbo zhinji dzenyika zvakadaro. MuSpain, zvakadaro, pane vatove vazhinji vakatora chinzvimbo chake kuvonga kune zvisina kufanira nzira izvo zvinokutendera iwe kutumira pasuru yakatengwa muApple Chitoro chenyika iyo wachi inotengeswa kune yako kero yekumba kune imwe nyika yeEuropean Union. Ndinoziva kuti muLatin America kune zvakare masevhisi akakumikidzwa kune iyi mhando yekugovera.
Sezvandinotaura, kunyangwe kumisikidzwa kwayo chaiko munyika medu kusingazivikanwe, inoramba ichitora kutarisisa nemoyo yevakawanda vakatendeka vanoda kugona kupfeka ichi chishandiso paruoko rwavo.
Nekudaro, vashandisi vanotova nazvo, vakataura kuti hapana sarudzo yemuno yekuona bhatiri rakasara pa iPhone yedu kubva pawachi, chimwe chinhu chakakosha senge yekuwedzera sarudzo. saka hatifanirwe kutora mudziyo wedu muhomwe kana uchitarisa mamiriro azvo, sezvo chaizvo pfungwa yeApple Watch iri iyo, kubata "zvinhu zvidiki" kubva paawa uye kwete kubva ku iPhone.
Iri dambudziko diki rinogona kugadziriswa, pakati pedzimwe nzira, nechishandiso MacID. Vazhinji venyu muchazviziva nekuve iro rinozivikanwa application iro "remashiripiti" kukiyinura iyo Mac ichishandisa iyo iPhone's Kubata ID, asi zvinoitika kuti chimwe chezvinhu icho icho chinotiratidza isu muApple Watch chishandiso ibhatiri. Zviripachena, iyi sarudzo inoitirwa kune avo vari vashandisi veichi chishandiso, asi kana isiri yako nyaya, zvirokwazvo kune dzimwe nzira dzakawanda dzekuzviita (sekutenda kwangu, kune mamwe mafashama ebasa anoita chiito ichi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuona iPhone bhatiri kubva kuApple Watch